Tuniisiya oo ay ka dhaceyso doorashada golayaasha deegaannada - BBC News Somali
Tuniisiya oo ay ka dhaceyso doorashada golayaasha deegaannada
Image caption Cod bixinta doorashada Golayaasha Deegaannada Dalka Tuniisiya
Dalka Tuniisiya oo ka dhaceyso doorashada golayaasha deegaannada oo ka kooban 350.
Shacabka dalka Tuniisiya ayaa maanta markii ugu horeesay u dareeraya doorashada golaha deegaanka tan iyo sannadkii 2011-ka, xiligaais oo Tuniisiya uu ka dhacay kacdoon dadweyne oo meesha lagaga saaray kaligii taliyihii hore ee dalkaasi, Zeynal Abidin bin Cali.
Dalkan Tuniisiya oo loo arko dal Dimuqraadiyadiisu ay caga dhigatay ayaa dhalinyarada dalkaasi waxaa ay isku dayayaan inay xal u helaan waxyabaaha dib u dhacxa keenay, sida in lagu guul dareystay in la abuuro fursado horumarineed iyo isqabqasiga dhinacyada siyaasadda ugu tunka weyn.
Doorashada golayaasha deegaannada ee dalka Tuniisiya ayaa lagu tilmaamay iney tahy mid taariikhi ah oo Tuniisiyada cusub u abuureyso fursad ay dowladaha hoose adeeggooda si toos ah bulshada ugu gaarsiiyaan.
Doorashadan oo ah mid lagu sii adkeynayo in awoodda maamulka hoos loo dhaadhiciyo taasoon suuragal noqonin xilliga uu dalka ka talinayey madaxweynihi hore Zine El Abidine.
Ku dhawaad 45 kun oo musharrax ayaa u tartamaya kuraasta 350 golayaasha deegaannada ee dalkaasi.
Image caption Tunisia oo ay ka billaabmeyso cod bixinta
Dareen noocee ayey doorashada ka qabaan dhalinyarada?
Amina Arfaoui waaxay tidhi "tani waa fursad waxayna fursad u tahay bulshada raadka iney ka qayb qaataan sababta oo ah kalsooni kuma qabno xisbiyada siyaasadeed.
Waa fursad kaddib marki uu kacdooyinka dhacay kaddib si dalka wax un looga qabto.
Waxay ballan qaadeen isbeddel balse waxba meysan sameyn laba laba ayey iisu qabsadeen sawir xun ayeyna naga bixiyeen.
Runti dadku ma doonayaan iney markale codkooda qasaariyaan marka waxaan isku dayeynaa inaan dadka la hadalno waxna fahansiinno faa'idada ay u leedahay doorashadan.
Dhalinyaradu ma faraxsano, wey ka cadheysan yihiin oo waxayba doonayaan ineyba waddanka isaga tagaan.
Waardiyayaal loo haysto weerarkii hotelka Tunisia
Dowladda Tunisia oo wada dadaalo ay ku qancinayso dibad baxayaasha
Wax kastaba waxaa laga helayaa barnaamij uu guddiga doorashooyinka diyaariyey oo la yidhahdo Run2Vote oo looga tala galay in bulshada looga dhiirrageliyo si ay codkooda u dhiibtaan ayna u ogaadaan cod bixintu iney iyagu quseyso.
Balse dadka doonaya iney sanduuqa doorashooyinka oo keli ah isbeddel ku dhaliyaan, gaar ahaanna dhalinyarada Tunisia oo isbeddelkan sabab u ahaa ayaa intooda badan cod bixinta laga fogeeyey.
Image caption Dhalinyarada isbeddel doonka oo aan diyaar u ahayn iney doorashadan codkooda ka dhiibtaan
Kama qayb qaadaneyso cod bixinta doorashada?
Dhalinyaraduna diyaar uma aha iney doorashadan ka qayb qaataan "magaceygu waa Linda, waxaan ahay 25 jir ma doonayo inaan doorashadan codkeyga ka dhiibto sababta oo ah ma jirto dhalinyara ahaan cid manta aniga I mataleyso.madax bannaani iyo xorriyad midna ma jirto oo cod uu rabitaanka dadka daciifka ka jawaabeyso balse dadki xoogga lahaa unba doorashada weli ku jira. Dhammaantoodna waxay doonayaan oo keli iney danahooda meel marsadaan dan iyo muraad kama laha arrimaha muwaaddiniinta".
Dalka Tuunisia ilaa 2011 xilka laga tuuray hoggaamiyihi hore waxaa hoggaaminta dalkaasi aqlabiyad ku lahaa xisbiga uu hoggaaminayey Alcaabidiin oo dowladaha hoosana u magacaabi jiray shaqsiyaad aan la soo dooran iney maamulaan.
Sida oo kalana waxaa jira musharrixiin shaqsi ah oo uu ka mid yahay aasaasaha ururka u ololeeya bulshada rayadka ah.
Dalka Tuunisia waxaa ka diiwaan gashan in ka badan 5 million oo qof oo cod bixiyeyaal sharci ah.